ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): New Year မှာ အမူးလွန်နိုင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ဆေးနည်းကောင်းများ ဆိုင်မွန် (ကျန်းမာရေး): New Year မှာ အမူးလွန်နိုင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ဆေးနည်းကောင်းများ
New Year မှာ အမူးလွန်နိုင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ဆေးနည်းကောင်းများ
အခုကာလ ကတော့ ရာသီဥတု အေးအေးနဲ့ သောက်လို့ အကောင်းဆုံး ကာလပါပဲ။ အသောက်များ တတ်တဲ့ သူတွေရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်တွေ ကလည်း အခုလို ကာလတွေမှာ ဖောင်းတယ်လို့ကို ရှိမှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အကယ် လို့များ သင်သာ အသောက်များ သွားမယ်ဆိုရင် အမူးလွန်မှုကို သက်သာစေဖို့ ဒီနည်းလမ်းလေး တွေကိုတော့ သိထား သင့်ပါတယ်။
၁. Sprite လို သံပုရာအအေးတွေ ဒါဇင်လိုက်ဆောင်ထားပါ
တရုတ်ပြည်က သုတေသန ပြုချက်တွေ အရတော့ သံပုရာ အနံ့ အရသာ ပါဝင်တဲ့ စားစရာတွေဟာ အယ်လ်ကိုဟောကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို ၅၇ ရာခိုင်နှုန်း အထိ လျှော့ချ ပေးနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ အမူးပြေမှုကို လေးဆလောက် ပိုပြီး မြန်ဆန် လာစေမှာပါ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သံပုရာ အချိုရည်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Alkaline ဓာတ်ဟာ သင့်ရဲ့ အစာ လမ်းကြောင်း အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မူးမောစေတဲ့ ဓာတ်တွေကို တိုက်ထုတ် ပေးနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂. ပျားရည်ဆမ်း ပေါင်မုန့် မီးကင်နဲ့ Black ကော်ဖီ တစ်ခွက်
ကော်ဖီမှာပါတဲ့ ကဖိန်းဓာတ် ကတော့ သင့်ရဲ့ အသောက်လွန်ပြီး ထိုင်းမှိုင်းနေ မှုကို ပုံမှန် ပြန်ဖြစ်အောင် အကျိုးပြု စေမှာပါ။ ကော်ဖီလေး သောက်ပြီးရင်တော့ ပေါင်မုန့် မီးကင်ကို ပျားရည် ဆမ်းပြီး စားလိုက်ပါ။
သင့်ရဲ့ ပူလောင်နေတဲ့ အစာအိမ်ကို ခဏငြိမ်သက် သွားစေမှာဖြစ်ပြီး လိုအပ်နေတဲ့ အာဟာရဓာတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေး ပါလိမ့်မယ်။ ပျားရည်ကတော့ အရင်သောက်သုံး ထားတဲ့ ကော်ဖီထဲက ခန္ဒာကိုယ် အတွက် မလိုတော့တဲ့ ကဖိန်းဓာတ်တွေကို ချေဖျက်ပေး သွားမှာပါ။ ကဖိန်းဓာတ်များနေရင်လည်း မကောင်းတာကြောင့် ရေနည်းနည်းသောက်လိုက် တာကလည်း ပိုအကျိုးပြုစေမှာပါ။
၃. ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည် တစ်ခွက် သောက်ပါ
အယ်ကိုဟောလ်မှာ အီသနောနဲ့ မီသနောဆိုပြီး ဓာတ်နှစ်မျိုး ပါဝင်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဒာ ကိုယ်ကတော့ အီသနော ဓာတ်ကို ဦးဆုံး ဖြိုခွင်းပြီးနောက်မှာတော့ မီသနောကို formaldehyde ဓာတ် အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲ ပေးပါတယ်။
formaldehyde ဓာတ်ဟာ သင့်ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကို အော်ဂလီဆန်အောင် ပြုလုပ်မှာပါ။ အဲ့လို အော်ဂလီဆန် တာမျိုးမဖြစ် ချင်ရင်တော့ ခရမ်းချဉ်သီး ဖျော်ရည်ကို သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။
သူက antioxidants ဓာတ်တွေကို ထုတ်လွှတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီး သင့်ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ် အတွင်းက အဆိပ်ဓာတ် တွေကို ချေဖျက်ပြီး ဇီဝက္မြဖြစ်စဉ်ကို ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်ပေး ပါလိမ့်မယ်။
Original link - http://health.thithtoolwin.com/2015/12/new-year.html
Posted by Te Tee at 12:55 AM